Abakhiqizi nabathengisi be-COVID-19 ikhithi wholesale | I-Immuno
Isetshenziselwe i- Ukutholwa okusheshayo kwe-Antigen ye-2019 inoveli coronavirus
I-IMMUNOBIO 2019-NCOV Ikhithi yokuhlola ye-Antigen isetshenziselwa kuphela ukutholwa kwekhwalithi ye-in vitro ye-2019-ncov antigen evela kumuntu osopharyngeal swabs noma ama-oropharyngeal swabs specimens.
Ikhithi yokuhlola i-IMMUNOBIO 2019-NCOV Antigen iyasebenza ekuxilongweni okusizayo kwe-coronavirus yenoveli ka-2019 2019, imiphumela ingeyereferensi yomtholampilo kuphela futhi ayinakusetshenziswa njengesisekelo sodwa sesinqumo sokuxilongwa nokukhishwa.
Umphumela omuhle wokuhlolwa udinga ukuqinisekiswa futhi, umphumela ongemuhle awukuvimbeli ukutheleleka kwe-2019 Ivd.
Ikhithi yokuhlola i-IMMUNOBIO 2019-NCOV Antigen yenzelwe ukuthi isetshenziswe ngabasebenzi abaqeqeshiwe nabaqeqeshiwe basemtholampilo abayalelwe futhi baqeqeshelwa amasu ezinqubo zokuxilonga i-in vitro.
Ukuhlolwa Okushesha Kakhulu, umphumela uzokhonjiswa imizuzu eyi-10-15
B. Ukuzwela kwe-Immuno 2019 coronavirus test kit: 95.6%
Ukucaciswa kwe-Immuno 2019 COVID Antigen test kit yokuhlola okusheshayo: 100%.
D. Kusebenza ekhaleni nasekhunjeni lomqala
1. Nge-CE Mark, i-DOC ne-ISO 13485
3. Umhlinzeki oqinisekisiwe waseChina onikezela isitifiketi
1. Thatha isivivinyo se-2019 COVID Antigen test test kit, i-buffer, kanye / noma izilawuli ukuze ulinganise izinga lokushisa ekamelweni (15-30 ° C) ngaphambi kokuhlolwa.
2. Susa i-antigen test kit esikhwameni esivaliwe bese uyisebenzisa ngokushesha okukhulu.
3. Beka idivaysi yokuhlola esheshayo ye-Antigen endaweni ehlanzekile neqondile. Phindisela emuva ishubhu leqoqo lesifanekiso, khipha amaconsi ama-3 wesifanekiso esilungisiwe esibonelweni (S) sekhasethi lokuhlola bese uqala isibali sikhathi. Bona umfanekiso ongezansi.
4. Linda ulayini (imigqa) onemibala uvele. Funda imiphumela ngemizuzu eyi-10. Ungahumushi umphumela ngemuva kwemizuzu engu-15.
- Okuhle (+): Kuvela imigqa emibili enemibala. Ulayini owodwa onemibala kufanele uvele njalo esifundeni somugqa wokulawula (C) bese omunye umugqa kufanele abe sesifundeni se-T line. * QAPHELA: Ukuqina kombala ezifundeni zomugqa wokuhlola kungahluka ngokuya ngobuningi be-SARS-CoV-2 ekhona esithombeni. Ngakho-ke, noma imuphi umbala wombala esifundeni somugqa wokuhlola kufanele ubhekwe njengokuhle futhi urekhodwe kanjalo. - Okubi (-): Umugqa owodwa onemibala uvela esifundeni somugqa wokulawula (C). Awukho umugqa ovela esifundeni se-T line. - Akuvumelekile: Umugqa wokulawula wehluleka ukuvela. Ivolumu yesampuli enganele noma amasu wenqubo angalungile yizizathu ezingaba khona zokwehluleka komugqa wokulawula. Buyekeza inqubo bese uphinda isivivinyo ngokuhlola okusha. Uma inkinga iqhubeka, yeka ukusebenzisa ikhithi yokuhlola ngokushesha bese uxhumane nomsabalalisi wakho wasendaweni
Langaphambilini I-COVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
Olandelayo: Isivivinyo se-Rapid 2019-ncov coronavirus Antigen
ukuhlolwa kwegazi kwe-antigen
umkhuhlane test antigen
ukuhlolwa kwe-antigen antigen yegciwane